Nepal Dayari | गुल्मीका एक राष्ट्रसेवक कर्मचारी : घरको एक्लो सहरा जो जीवन म’र’ण’को दोषाधमा अस्पतालमा छ’ट्प’टा’ई’रहेका छन् !
बैसाख २०, २०७८ सोमबार ३०८ पटक हेरिएको
घरको एउटा छोरा , पढाईमा मेहनति ,केहि बर्ष भयो लोकसेवाको परिक्षाबाट खरिदारमा नाम निकालि जिल्ला प्रसासन कार्यालय गुल्मिमा कार्येरत थिए प्युठानका सन्दिप परियार । नया बर्षको अबसरमा खुसि र उमं’ग बोकि गत बैशाख १ गते प्युठानको स्वर्गद्वारी मन्दिरमा महाप्रभुको दर्सन गर्न हिडेका सन्दिप मन्दिर नजिकै रुमाले भन्ने ठाउमा जिप दु’र्घट’नामा परे ।
उनले आफु संगै गएका केहि साथी गु’माए । केहि घाईते साथिहरु अस्पतालको सै’यामा उनिसङ्गै जिवन र म’र’ण’को दो’सा’द मा छ’टप’टि रहेका छन । परिवारको आ’सा भनेकै सन्दिप हुन । उनि नै एस्तो अबस्थामा परेपछि बाबा आमा ले कस्को आ’स गर्ने ? गरिब परिवारमा हुर्केका रास्ट्रसेबक कर्मचारी सन्दिप सानैदेखि पढाईमा टाठो र मायालु स्वभाबका हुन ।
प्युठान को मल्लरानि गाउपालिका ३ स्थित सारदा माबि चौरपानी बाट एस एल सि पास गरेका सन्दिप मेरा नजिकको मित्र पनि हुन । तसर्थ सन्दिपलाई अहिले तपाई हाम्रो सानो भएपनि सहयोगको खाचो छ । २०७८ बैशाख १ गतेको घ’टना पस्चात उनि संगै ६ जना घा’ई’तेलाई नेपाल आर्मिको हेलिकप्टर मा राखि प्युठान देखि काठमाडौ लगियो । महिना भैसक्यो तस्बिरमा देखाईएको जस्तै अबस्थामा अस्पतालको आ’इ सि यु बेड मा भे’न्टिलेटर को सहायताले बा’चेका छन सन्दिप ।
सन्दिपको घा’टि दे’खि मुनिको भाग मे’रु’द’ण्ड स्ना’यु नलि भा’चि’एको छ । सन्दिपलाई काठमाडौमा रहेको शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा यस्तो अबस्थामा राखिएको छ । उनको अहिलेसम्म ज’नत’न उपचार खर्च चलेको थियो । अब उपचार खर्च जु’टाउन ह’म्मे ह’म्मे परेपछि सन्दिपका आफन्त र बहिनिहरु अस्पतालमा रु’दै दाईलाई बचाउन अपिल गर्दै सहयोग मागिरहेका छन । तपाई हामिले एउटा रास्ट्रसेवक ईमान्दार कर्मचारी मात्र नभैइ जो कसैलाई पनि उपचारको अभावमा म’र्न दिनु हुदैन ।
भोलि तपाई हामिलाई पनि एस्तो अबस्था आई लाग्न सक्छ । एक एक रुपैया सहयोग गरेर भएपनि त्यस्ता ब्याक्तिहरुलाई बचाउनु सबैभन्दा ठुलो धर्म हो । सन्दिपलाई बचाउनको लागि जस्ले जहाबाट जति सकिन्छ सहयोग गरिदिनुहुन विनम्र अनुरोघ छ । तपाईले बैंकको खातामा सिधै सहयोग गर्नु हुन्छ भने सन्दिपको बैनि मधुमाया परियारको नाम मा खोलिएको रास्टृय बाणिज्य बैंकको खाता नम्बर 1420100071705010 मा रकम जम्मा गरिदिनु होला .अथवा केहि जानकारि लिनुपरे सिधै मलाई 9847873529 मा फोन गर्नुहोला धन्यवाद ! सकिन्छ सहयोग नसके शेयर भएपनि गरिदिनुहोला
बोम बहादुर परियारको फेसबुक वालबाट सबैले आफुले सक्दो सहयोग र शेयर गर्नुहालो कृपया